ကျပ် ခုနစ်ဘီလျံကဲ့သို့အမှုများ ထပ်ပေါ်လာရန်ရှိနေ
အစိုးရအပြောင်းအလဲကာလတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၌ ကျပ်ခုနှစ်ဘီလျံနှင့်အတူ မော်တော်ယာဉ်အချို့ စာရင်းပျောက်နေမှုကို စိစစ်တွေ့ရှိခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်မျိုး အခြားသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အချို့တွင် ထပ်မံပေါ်ပေါက်ရန် အလားအလာရှိနေတယ်လို့ အာဏာရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၊ ဗဟိုအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းထိန်က Frontier ကို ပြောပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ပြီးသူ လေးသောင်းနီးပါးရှိ
White Card ကိုင်ဆောင်ထားသူ ပမာဏအများဆုံးဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ အောင်မြင်မှု မရသေးဘူးဆိုတာ ကိန်းဂဏန်းတွေကို ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
နေပြည်တော်၊ မေ ၃ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေအပေါ်မှာ ချမှတ်ထားတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကို တစ်ဆင့်ချင်း ဖြေလျှော့ပေးသွားဖို့အတွက် စဉ်းစားထားပြီဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆက်အောင်က Frontier ကို ပြောပါတယ်။ “ပြည်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး ထိရောက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်မယ့် ဖြေလျှော့မှုတွေ ဆက်ပြီးလုပ်ဖို့အတွက် စဉ်းစားထားပြီး.
မြန်မာနိုင်ငံပိုင် အရန်နိုင်ငံခြားငွေနှင့် ရွှေပမာဏ မကြာမီ ထုတ်ပြန်မည်
နေပြည်တော်၊ မေ ၃ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က တာဝန်ယူစီမံခန့်ခွဲနေသည့် နိုင်ငံပိုင် အရန်နိုင်ငံခြားငွေ၊ ရွှေပမာဏ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပြည်ပကြွေးမြီအချိုးကဲ့သို့သော သတင်းအချက်အလက်များကို မကြာမီ ထုတ်ပြန်ပေးမည်ဟု ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆက်အောင်က ပြောကြားသည်။ “ဗဟိုဘဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ထုတ်ပြန်ဖို့ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က အတည်ပြုပြီးပါပြီ။ အဲဒါ ထွက်လာတယ်ဆိုရင်.
အမေရိကန်နှင့် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မတက်
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဝါရှင်တန်တွင် ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း ကျင်းပမည့် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ တွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားမှုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ငြင်းဆိုခဲ့သည်ဟု ရိုက်တာသတင်းဌာနက ရေးသားထားသည်။
သတင်းရယူပိုင်ခွင့်အခြေအနေအပေါ် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးနှင့် စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့များ သဘောထားကွဲလွဲ
အစိုးရ၏ သတင်းအချက်လက်များကို လွတ်လပ်စွာ ရယူနိုင်မှုတိုးတက်လာသည်ဟု ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်က ပြောကြားခဲ့သော်လည်း စာနယ်ဇင်းသမားအဖွဲ့များကမူ ထိုအချက်အပေါ် သဘောထား ကွဲလွဲမှုများရှိနေသည်။
မောင်တောဒေသတွင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို အစိုးရက ငြင်းဆိုနေခြင်းနှင့် ယင်းကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ငြင်းဆန်နေခြင်းကို မြန်မာပြည်သူများက နှစ်သက်ကြသော်လည်း ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ဖြစ်လာနိုင်သော ဆူပူသောင်းကျန်းမှုများကို ကိုင်တွယ်ရာ၌ ပိုမိုအခက်တွေ့စေနိုင်သည်။